I-Marketing Infographics »Ikhasi 256 kwangu-257 Martech Zone
Ubuchwepheshe Bokukhangisa Izibalo nokuhlola Ukukhangisa Okuqukethwe Ukuphathwa Kobudlelwano Namakhasimende Nezingxenyekazi Zedatha Ezohwebo kanye nokudayisa Ukumaketha Nge-imeyili Nokuzenzakalela Kwe-imeyili Ubuchwepheshe obuqhamukayo Umcimbi Wokumaketha Amavidiyo Wokumaketha Nokuthengisa Izincwadi Zokumaketha Imicimbi Yokumaketha I-Marketing Infographics Amathuluzi Okukhangisa Ukuqeqeshwa Kwezentengiso Ukumakethwa Kwamaselula Nethebulethi Ezimayelana Nomphakathi Ukunika Amandla Ukuthengisa Sesha Marketing Social Media Marketing
NgoLwesine, Novemba 4, 2010 NgoLwesine, July 25, 2013 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Awekho amabhizinisi amaningi kakhulu engiwasebenzelayo lapho ngibona khona izici ezivamile ezingxenyeni zemakethe, kodwa njengoba ngicabanga ngeviki lami lomsebenzi nendlela engiphendula ngayo ekukhangiseni, kufanele ngivume ukuthi lolu cwaningo olwenziwe nguBizo kungenzeka lukhona kokuthile. UBizo ukhiphe le infographic izolo, enesihloko esithi An Advertiser's Weekly Planner ekhombisa osomabhizinisi bosuku, ngokujwayelekile, ukuthi kungenzeka basabele ezikhangisweni eziku-inthanethi. UBizo uphinde wahlola abahlanu abahluke kakhulu
NgoMgqibelo, Okthoba 9, 2010 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Sonke sinabo - isikhohlakali esivutha nokugquma kukho konke ukuphawula kwakho - sithukuthelisa ezinye izivakashi zethu futhi sikhiqiza imayhem. Kuyakhathaza impela, kepha kunendlela yokuvimbela umuntu omubi wezokuxhumana. Le yi-infographic enhle ekhishwe yi-Search Engine Journal ngokususelwa kuma-Villains we-8 Media Social. Vele, kukhona okungaqondakali kokuthi i-SEJ ithole umxhasi ku-Infographic…
Ingabe Ukuziphatha Kokuthenga Okuthengiwe ku-Inthanethi?
NgoLwesihlanu, Septhemba 17, 2010 NgoLwesihlanu, Septhemba 6, 2013 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Nayi i-infographic ekhangayo evela ku-KISSmetrics kumbala nomthelela wayo ekuthathweni kwezinqumo. Ukugcina lokhu engqondweni, okuthunyelwe kwakamuva kukaNick kokusebenzisa amakhukhi ukuhlinzeka umuzwa ohlukile kubavakashi kunokuba ikhasimende lingasizakala… mhlawumbe isayithi lakho lingashintsha amashidi wesitayela lisuke esimweni esimnyama (umfutho) liye kusakhiwo esibomvana… noma uma usebenzisa okhethekile, isakhiwo esiluhlaza okwesibhakabhaka!
NgoLwesibili, Agasti 31, 2010 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Kube kuhle ukuqhuma kuJohn Uhri weRed Bit Blue Bit eBlog Indiana, kulo nyaka. UJohn wenza into epholile impela - kunokuba abhale amanothi ajwayelekile phakathi nezingxoxo, udweba imidwebo yolwazi yokudala (i-infographic). Ngakho-ke, nayi i-infographic enhle ye-Corporate Blogging for Dummies ayenzile ngemuva kokufunda incwadi (chofoza ukulanda usayizi ogcwele)! Ngiyabonga John! Kuhle ukubona ukubonwa okufana nalokhu ngoba kuqhathanisa nakanjani
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Ama-infographics abekhona isikhashana kepha muva nje abe yilo lonke ulaka. Ngamasayithi afana ne-Digg afe, abathengisi abafuna ukuthola isikhukhula sezimoto esizeni sabo bafaka imidwebo efundisayo exoxa indaba enhle. Ngama-dollar ayizinkulungwane ezimbalwa, ungaqasha inkampani ye-infographic ukuthi ikhiqize isibonisi sokucaciswa okuphezulu esichaza inkinga. Inkampani ye-Infographic izokwenza ucwaningo nokuklama. Abanye
Okudlule 1 ... 255 256 257 Okulandelayo →
Ikhasinkomba 256 of 257